Madaxweyne Faroole oo Garowe ku soo dhaweeyey Madaxweynaha Khaatumo State • Horseed Media
You are here: Home / Doorashada Puntland 2014 / Madaxweyne Faroole oo Garowe ku soo dhaweeyey Madaxweynaha Khaatumo State
Madaxweyne Faroole oo Garowe ku soo dhaweeyey Madaxweynaha Khaatumo State
January 2, 2014 - By: Hanad Askar
Axmed Cilmi Cismaan (Karaash) oo ahaa Madaxweynayaashii kaltanka ahaa ee Maamulka Khaatumo ee la dhisey 2012, ayaa maanta yimid caasimadda Puntland ee Garoowe. Axmed Karaash ayaa looga hortegey banaanka hore ee magaalada waxaana soo dhaweeyey qaar kamid ah Xukuumadda waqtigeedi gabaabsiga yahay, maamulka Gobolka Nugaal iyo masuuliyiin kale.
Axmed Karaash ayaa weli ah Madaxweynaha Khaatumo State, kaas oo markii la dhisaayey uu sheegey in uu yahay mid gaar u ah Beelaha Sool, Sanaag iyo Cayn dega ee Dhulbahante kana madaxbanaan maamulada deriska la ah, waxaana uu ahaa mabd’a uu ku dhisnaa maamulkaasi.
Guddoomiyaha Gobolka Nugaal Cabdi Xirsi Qarjab oo hadal soo dhaweyn ah u sameeyey ayaa yiri: “Mudane ku soo dhawoow caasimadda Punrland, waaaana kaaga mahad celineynaa muddadii aad halganka uga maqneyd”.
Axmed Karaash oo saxaafadda la hadley ayaa sheegay, in uu yimid isaga oo hoggaaminaaya Beesha Ugaadhyahan Siyaad oo aan cidi ka maqneyn, waxaa naga maqan Garaadkii guud ee beesha Garaad Saleebaan oo isaguna naga daba imaan doona ayuu yiri Axmed Karaash.
Dhegaysio Codka Madaxweynaha Khaarumo State Axmed Cilmi Cismaan
Axmed Karaash ayaa hoosta ka xariiqey in aysan markii horeba aysan ka maqneyn Garoowe, halganka uu sheegay Guddoomiyuha Nugaal ee aan ku maqneyn waa run kaas ayaan ku maqneyn markii horeba waan iskuu ogeyn anaga iyo Garoowe ayuu yiri Axmed Karaash, laakiin waxaa jirta maamul la yiraahdo Khiyaano oo naga hoos samaysmey, kaas oo hagar daamo nagu ahaa.
Axmed karaash ayaa ugu danbeyntii sheegey in Khaatumo Puntland tahay Puntland Khaatumo tahay sagarona laba tun oo la kala qaado aysan lahayn.
Axmed Cilmi Cismaan ayaa ka mid ahaa Golihii Wasiirada ee u horeeyey ee Madaxweyne Faroole soo dhiso sanadkii 2009, ayaa booqasho ku tegey Madaxtooyada waxaana uu kulan gaar ah la qaatey Madaxweynaha xilku ka sii dhamaanyo Dr.Faroole, lama oga waxyaabaha ay ka wada hadleen.
Siyaasiyiinta qaarkood ee Garoowe ku sugan ayaa ku doodaya in ay dhici karto in dhismihi Khaatumo State uu gacan ku lahaa Madaxweyne Faroole isla markaana ka shaqeeyey in Puntland kala go’do, Axmed Karaashna uu isaga halkaas u metalaayey maadaama maanta uu Garoowe ugu soo dhaweeyey sidii Madaxweyne.
Maamulka Khaatumo ayaa waxaa dhex-galay khilaaf weyn oo saameyey xaruntii maamulkaas lagu dhisey, waxaa la aaminsan yahay in isbedelka dhaw ee Puntland ka socda uu saameyn ku yeeshay. Dhawaan waxaa ka dhacay magaalada Taleex dagaal u dhexeeyey ciidamo uu watey Madaxweyne kuxigeenka Puntland Cabdisamad Cali Shire iyo kuwo taabacsanaa maamulka Khaatumo, waxaa ku dhintey dad 10 qof ku dhaw, waxaana magaalada ka dhacay barakcay iyada oo Jifi ka mid ah kuwa magaalada dega ay ka baxeen oo baneeyeen in badan oo ka mid ah guryahoodi, Masuuliyadda dagaalkaas ayey dusha uga tuureen Madaxweyne kuxigeenka Puntland cabdisamad Cali Shire oo qoyskiisu dego magaalada Taleex.
Horseed Media 2014